Shiinaha qiimo wanaagsan shiinaha jumlo dalag cusub oo soosaara sinjibiil cusub iyo alaableyda | AGR
sinjibiil cusub ayaa leh jeermis dilis sunta sunta ah, sinjibiil ku sinjibiil jirka, tani waxay soo saari kartaa enzyme antioxidant, waxay leedahay awood xoogan oo ay kula tacaali karto xagjirnimada oksijiinta, laakiin sidoo kale waxay ka waxtar badan tahay fitamiin E.
Sanjabiilku wuxuu kicin karaa xuubka caloosha, wuxuu sababi karaa xarunta vasomotor iyo dareen-celinta dareen-celinta dareenka kacsiga galmada, wuxuu dhiirrigelin karaa wareegga dhiigga, wuxuu sare u qaadi karaa shaqada caloosha, xanuunka caloosha, dhidid, saamayn antipyretic ah. Jiang wuxuu kaloo xoojiyaa dheecaanka casiirka caloosha iyo dheecaanka xiidmaha, caawinta dheefshiidka; sinjibiil zingiberene, zingerone waxaa jira kaalin muuqata oo joojinta matagga.
Sanjabiilku wuxuu si weyn u xakameynayaa maqaarka fungal wuxuuna dilaa Trichomonas waxtarka xubinta taranka, dawee noocyo kala duwan oo carbuun barar barar ah.
Sanjabiilku wuxuu joojiyaa dhaqdhaqaaqa unugyada kansarka, wuxuu yareeyaa saamaynta sunta ah ee kansarka, wuxuu ciyaari karaa saameyn kahortagga kansarka.
Sanjabiilku wuxuu leeyahay dhidid dhidid, diiriya qufaca sambabka, sunta sunta, wuxuu daaweyn karaa qabow daran, calool qabow, matag, qufac qabow, calool xanuun, shuban, iyo cuduro kale oo ku jira sunta carsaanyada
Sinjibiisha timaha luminta sinjibiil ayaa si muuqata u kala duwan sinjibiil
Sanjabiisha waa warshad ubax magaceeda rasmiga ahna waa Zingiber officinale. Rhizome, oo badanaa loo yaqaan asalka, waa waxa aad u badan tahay inaad taqaanid. Xididku waa basbaas iyo basbaas badan oo dhadhan leh, oo ay ku jiraan culeysyo daaweyn ah. Waxaa looga adeegsadaa adduunka oo idil marka la isticmaalayo iyo dalabyada caafimaad - labadaba sabab wanaagsan
Sanjabiilku waa geedo cimilo ah oo badanaa lagu beero bartamaha, koonfur-bari ilaa koonfur-galbeed Shiinaha, sidoo kale waxaa badanaa lagu beeraa Aasiyada kulaylaha. Rhizome waxaa loo isticmaalaa ujeeddooyin daawo ah, iyo badeecooyin cusub ama la qalajiyey ayaa loo isticmaali karaa inay ka kooban yihiin waxyaabo lagu kariyo ama lagu sameeyo pickles iyo sinjibiil sonkor ah. Saliida carafta waxaa laga soo saari karaa jirridaha, caleemaha, iyo rhizomes-ka, waxaana loo isticmaali karaa cuntada, cabitaanka iyo udgoonka udgoon.
Sanjabiil cusub wuxuu soo saari karaa dhadhan cajaa’ib leh wuxuuna leeyahay saameyn wax ku ool ah oo ah yareynta bakteeriyada, wadnaha ku haayo xaalad wanaagsan iyo difaac.
Hore: qiimaha jaban ee bulk toonta fresh bag bulish mesh bag of garlic
Xiga: tayo sare leh qiimaha ugu wanaagsan Shandong cusub oo sinjabiil jaalle ah
tayo sare leh qiimaha ugu fiican Shandong yo basbaas cusub ...
Qiimaha ugu Fiican Shiinaha Dhoofinta Dalag Cusub oo Cusub ...
dhoofinta khudradda cusub jumlada sinjibiil iyo ga ...